Wixii annaga nagu saabsanDr Judy Tang2021-03-08T13:35:41+10:00
Wixii ku saabsan HeartChat
Mashruuca “HeartChat” waxaa bilawday Victorian Multicultural Commission si loo sahlo dad kuwaas oo ku hadla luqadaha aan ka ahayn Ingiriiska si loo akhriyo loona fahmo macluumaadka ku saabsan dhimirka.
Caafimaadka Dhimirka waxaa ka mid ah dareenkeena, fekerkeena iyo cilaaqaadka. Waxay saamayn kartaa sidaan u fekero, u dareeno, waxna u samayno. Waxay kaloo saamaysaa sidaan wax uga qabano cadaadiska, la hadalka kuwa kale, iyo samaynta kala-doorashada marka laga bilaabo ilma yar ilaa mid weyn.
HeartChat waa amaan waana bar kulan si:
fiican loogu fahmo caafimaadka dhimirka – wixii wanaagsan iyo wixii xun ee dhimirka caafimaadka
Raadi mihnadle si aad ula hadasho – qof ku hadli kara luqadaada iyo/ama yaqaan asalka dhaqankaaga
Mashruca HeartChat wuxuu la shaqeeyaa ururada soo socda ee wada shaqeeya,
kaalmadooda iyo xirfadahooda:
MA WAXAAD TAHAY MIHNADLAHA CAAFIMAADKA DHIMIRKA?
LAGALA SOO QAYBGAL HEARTCHART
Ku soo biir HeartChart
Mashruuca “HeartChat” wuxuu soo dhowaynayaa mihnadle kasta oo dhimirka caafimaadka oo doonaya in uu ku jiro tusaha wuxuuna bixiyaa kaalmada caafimaadka dhimirka iyo adeegyada shakhsiyaadka dhaqamada kala duwan iyo bulshooyinka.
Ilaa Juulay 1deeda 2021 – HeartChat waxay ka dhaafaysaa dhamaan ujrada meelmarinta, sidaas darteed waxaad nala dhisi kartaa macmiilahaaga asaaskiisa
Waxaan ku weydiinaynaa keliya inaad ka fekerto bixinta lacag yar si aanu ugu dhiirigelino shakhsiyaad badan oo dhaqama kala duwan leh iyo bulshooyinku inay heli karaan adeegaaga la jeclaaday.
Haddii aad jeclaan lahayd macluumaad intaas ka badan, foomkaan halkaan ku buuxi si sahlan Foomka Gelida
Ku soo biir liiska ka-wada xiriirka wixii cusub